ISKU DAAJI DIGADA DIGSIGA: SIDA LOO SAMEEYO, MA SUURTOGAL IN LA KARIYO KULEYLKA? - KHUDRADDA
Corn waa qiyaastii 10 kun oo sano ah sida dalagga. Waxaa laga helay degaanka koonfurta casriga ah ee Mexico, halkaas oo uu ku koray taniyo wakhtiyadii hore. Ma aha oo keliya hurdi, laakiin xitaa casaan ama madow.
Corn waa dhawr nooc:
hadhuudh macaan (jecel yahay dhammaan fiisooyinka);
silic ama indian;
burburinta (u qaybsan laba nooc: barley iyo bariis);
Japanese kala duwanaayeen.
Astaanta mooska waxay gaartaa dhererka illaa todobo mitir oo dhexroor. Mid ka mid ah farqiga ugu weyn ee warshadani ka timid dalagyada kale waa in uu gudaha ka galo oo uu ku jiro parenchyma. Caleenta hadhuudhku waa ballaaran yahay. Stamens iyo tigidhada ayaa lagu ururiyaa inflorescences. Waxay leedahay dhaleeceyn dheer. Koritaanka iyo horumarinta hadhuudhku wuxuu dhacaa 90 illaa 200 maalmood. Calaamaduhu waxay muuqdaan 11 maalmood kadib.
Warshadani waxay jeceshahay diirimaad. Seeds ayaa Gagaashan doona 10 darajo Celsius. Wixii geedo u baahan yahay heerkul ilaa 17 darajo Celsius.
MUHIIM! Caleemaha u adkeysanaya 5-6 digrii. Wixii koritaanka caadiga ah ee hadhuudhku u baahan yahay heerkul ah 22 darajo Celsius. Kaliya inta lagu jiro xilliga muuqaalka gudaha ee gogol-xakameyn kara kulaylka iyo la'aanta qoyaan.
Dhibaato weyn waxay keeni kartaa dhirta: carrada qallalan, cimilo kulul, qoyaan yar. Qadar badan oo qoyaan ah ayaa la wada baabbi'iyey ilaa 10 maalmood ka hor inta aan la buufin iyo 20 maalmood ka dib. Biyaha waxay u baahan yihiin saddex boqol oo kiilo garaam ah si loo abuuro hal kilo oo ah qalalan qallalan.
On on carradu aad u qoyan, geedka sii koraayo. Qoyaanka caadiga ah waxaa loo tixgeliyaa 70-80 boqolkiiba. Corn waxay u baahan tahay qadar badan oo iftiin ah, maxaa yeelay waxaa ugu wanaagsan in la beero on slopes koonfurta. Waxaad ma beeri kartid aad u qaro weyn, sababtoo ah hadhuudhku ma jecla madow.
Waad ku mahadsan tahay arrinka waxsoosaarka leh waxaa jiri doona goosashada qani ah. Carrabka ugu haboon waa chernozem. Ciidda Peaty sidoo kale waa ku haboon tahay hadhuudhka, laakiin on dhoobo si weyn u koraan. Naxariista hadhuudhka waa in ay aad u dalbato ciidda. Haddii ciidda ay hodan ku tahay acid, markaa waa inay ahaato lime.
Warshadaan waxaa lagu qiimeeyaa aduunka oo dhan. Waxaa loo isticmaalaa karinta iyo daawada kale. Waa warshad caafimaad leh. Waxaa loo isticmaalaa dhammaan laanta la isku qurxiyo iyo daawada, iyo ma aha oo kaliya sida cuntada wax soo saarka.
Corn waa hodan ku jirta macdanta kala duwan. Protein Corn waxa ku jira lysine iyo tryptophan. Corn sidoo kale waxaa ka mid ah: panthenolic acid, tannins, saliidda muhiimka ah iyo saliidaha dufanka iyo pyridoxine, biotin, riboflamin. Maaddooyinka waxtarka leh waxay ku jiraan labadaba geerida hadhuudhka iyo caleemaha.
Waa muhiim! Waxay leedahay qiimaha tamarta hooseeya. Cunista dhirta ayaa caawisa nadiifinta jirka. Wuxuu saaraa sunta iyo radionuclides. Waxay hoos u dhigtaa geedi socodka gabowga. Cobs waa daaweeyaa cudurrada sida tiibishada iyo oof-wareenka. Corn wuxuu ka kooban yahay fiitamiinno lagama maarmaanka u ah carruurta.
Nasiib darro, hadhuudhka xagaaga waxaa loo tixgeliyaa sababta 25% ee sumowga. Si aad u dooratid hadhuudhka saxda ah ee wanaagsan waa inuu raacaa dhowr xeer oo fudud:
Ka saar dushooda oo aad aragto koollada. Haddii ay jiraan caleemo huruud ah oo cagaar ah oo caleenta ah, ka dibna kuwani waa calaamadaha fungus. Inta badan waxa ay tahay midka sare, si tartiib ah fangaska u guurto caleemaha.
Kormeer caleemaha. Ha qaadan hadhuudh iyaga oo waxyeello u geysanaya, maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay in ay yihiin bakteeriya. Sidoo kale dhaawacyo ayaa la jebin karaa. Tan macnaheedu waa in hadhuudhku aanu ku haboonayn karinta.
Ma dooran kartid hadhuudh la urin karo, sidii loola dhaqmay cayayaanka.
Diyaarinta cunto karinta
The ugu delicious waa hadhuudhka dhalinyarada. Waxaa loo kariyaa siyaabo kala duwan. Si aad u karisid, waxaad u baahan doontaa weel wax ku jira cobs, milix iyo 15 daqiiqo oo wakhtiga la karinayo (sida loo kariyo hadhuudhka ku yaala rugta, halkan ka akhriso).
Sidoo kale, hadhuudhka waxaa loo diyaari karaa siyaabo kale, tusaale ahaan: foornada, boorsada laba-geeska ah, foornada mikrovave, foornada diirran, mashiinka qafiifka ah, naxashka, kaabajka, kernels-kernels-kernels ee shiilanka.
Sida loo shiilo: maaddooyinka iyo cuntada
Tani waa saxan aan caadi ahayn oo sax ah. Wanaagsan tahay waxkasta oo cunto ah. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo kariyo hadhuudh la dubay:
0.2 litir oo biyo ah.
45 garaam oo saliid ah.
Nadiifi dhammaan hadhuudhka.
Isku shub ilaa hadhuudhka 5 daqiiqo leh saliid saytuun.
Marka xigta, dabka ka dhig oo ku dar biyo.
Ka dibna buro subagga iyo milixda.
Iskalaabi cobssiyada saliidda.
DAREEN! Digriiga waa inuu ahaadaa hoostiisa hoose.
Iyada oo hilib doofaar ah
Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado:
4 litir oo biyo ah.
0.1 kilo oo hilib doofaar ah.
25 garaam oo subag.
Peel iyo isku shiishaa cobs.
Marka xigta, u wareeji digsi oo ku shub biyo, ku dar cusbo oo isku karsaaraya.
Ka dib markii la kariyo, yareyso kuleylka iyo isku kari ilaa 20 daqiiqadood. Kaddibna qalaji.
Dalagyada la qalajiyay ku rid digsiga leh subag hore loo dhalaalay, ku dar digir qastar dheeri ah oo isku shiil 6 daqiiqo oo kale. Ku fiican roodhida.
Fiiri fiidiyaha roodhida ee miro la shiilay oo lagu duubay hilib doofaar:
Hal litir oo caano ah.
Foormoon sonkor ah.
Shaxan oo saliid saytuun ah.
2-3 xabo oo toon ah.
Nadiifi oo maydh tuubooyinka, ku rid digsi ku shub caanaha, biyaha, ku dar sonkorta. Karso ilaa 20 daqiiqo.
Isku daa hadhuudh iyo saliid saliid saytuun ah.
Geedka hadhka ku rid digsiga dhagaxda iyo shiil ilaa 20 daqiiqo.
Diyaarinta shidaalka, waxaad u baahan tahay inaad subagga, basil, toonta iyo farmaajo ku darsato sheyga.
Labbiska diyaargarowga saliidda iyo galleyda.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido waxyaabaha kale ee ku saabsan habka si habboon loo marin karo oo u ilaalin karo hadhuudhka guriga, kariyo boorash, rooti, ​​salad, oo ay ku jiraan ulaha qashin, iyo sidoo kale fiirso cuntooyinka qasacadaysan.
Cunista iyo u adeegidda hadhuudhku sidoo kale waa muhiim si sax ah. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu quudiyo hadhuudh, halkan waa mid ka mid ah: marka hore waxaad u baahan tahay inaad kala qaybiso hadhuudh la karkariyey, ka saar hal taxane ah miro, ku cadaadi suulkaaga ku xigga oo riix. Isla dhaqdhaqaaq isku mid ah oo la sameeyo inta kale.
Corn waa la kori karaa dhul furan. Waxaa loo qasi karaa labo siyaabood: iyadoo lagu caawinayo abuurka iyo geedo. Waa wax soo saara warshadaha adduunka oo dhan waxaana loo tixgeliyaa quudinta iyo cuntada ugu muhiimsan, iyo sidoo kale dhaqanka farsamada.
Dalalka koraya ee koraya waxaa ka mid ah: India, France, Russia, iyo sidoo kale Argentina, South America iyo Argentina. Hogaamiyeyaashu waxaa loo tixgeliyaa wadamadan sida Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed.